यी १० विश्व प्रशिद्ध व्यक्ति जसको यौन सम्पर्क गर्दा गर्दै ज्यान गयो
निशान न्युज जेष्ठ १८, 2076
काठमाडौँ । यौन सम्पर्क गर्दा गर्दाै ज्यान गुमाएका विश्व प्रशिद्ध १० जना व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए । उनीहरुको मृत्यु बारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भएका थिए । मानिसहरु जन्मीए पछि एक दिन मर्ने पर्छ । यो एउता जन्म सिद्ध कुरा नै हो ।
विश्वमा मानिसहरु धेरै छन् । जो यौन सम्पर्कका बेलामा निधन भएका छन् । ति मध्य हामी यौन सम्पर्क गर्दा गर्दै मृत्यु भएका चर्चित ब्यक्तिहरुको बारेमा जानकारी दिन गईरहेका छौं । जो विश्वमा प्रसिद्ध समेत रहेका थिए ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका ४१ औं उपराष्ट्रपति नेल्सन रकरफेलर पनि यौन सम्पर्कका बेलामा निधन भएको थियो । उनको मृत्युबारे सुरुमा परस्पर विरोधी समाचारहरू आए पनि उनको निधन यौन सम्पर्कका बेलामा भएको थियो ।
७० वर्षीय रकरफेलर आफ्नी सहयोगी २५ वर्षीय सुन्दरी मेगन मारसाकसँग आफ्नो नीजी कार्यालयमा एक्लै समय बिताइरहँदा उनलाई ह्दयघात भएको थियो । सन् १९७९ को जनवरी २६ मा अकस्मात उनको मृत्यु भएको समाचार आएको थियो ।
२. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रांंकलिन डी रुज्भेल्ट
अमेरिकाका ३२ औं राष्ट्रपति फ्रांंकलिन डी रुज्भेल्टले आफ्नी प्रेमीका लुसी मर्सरसंग यौन सम्पर्कका बेलमा ज्यान गुमाए का थिए । उनले प्रेमिकाको अँगालोमै अन्तिम पटक सास फेरेका थिए ।
रुज्भेल्टले चोटी अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन जितेको कीर्तिमान बनाएका थिए । उनको मृत्युको समय दोस्रो विश्वयुद्ध चलिराखेको थियो ।
३. पोप लियो सप्तम
भ्याटिकन सिटीमा बस्ने रोमन क्याथोलिक इसाई धर्मका सर्वोच्च गुरु पोपलाई यौन आचरणबाट टाढै बस्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । तर केहि पोपहरूकोप मृत्यु नै यौन सम्पर्कको बेलामा भएको बताइन्छ ।
लियो सन् ९३६ मा पोप बनेका थिए र उक्त समय रोमन क्याथोलिकहरू मुसलमानहरूसँग धर्मयुद्ध लडिराखेका थिए । ९३९ मा यौनक्रियाको क्रममा उनको ज्यान गएको थियो ।
४. पोप जोन १२ औं
सन् ९५५ मा पोप बनेका ओक्टाभियानस भ्याटिकन पुगेपछि पोप जोन १२ औँ बने । सन् ९६४ मा उनको मृत्यु समेत यौनक्रियाकै दौरान भएको थियो ।
५. पोप जोन १३ औं
रोममा जन्मिएका जियोभानी क्रेसेन्टियसले ९६५ मा पोपको पद सम्हाले र पोप जोन १३ औं भए । उनको मृत्यु पनि यौनक्रियाकै दौरान सन् ९७२ मा भयो ।
६.पोप पउल द्वितीय
पोप पउल द्वितीय पोपको पद धारण गरेका अर्का त्यस्ता व्यक्ति हुन् जस्क्ले यौनक्रियाकै क्रममा ज्यान गुमाए । उनको जन्मको नाम पिएत्रो बार्बो थियो र उनी सन् १४५४ मा पोपको असनमा बसे र १४७१ मा एउटा पुरुषसँग संसर्गका क्रममा उनको प्राण गएको मानिन्छ ।
७. फिलिप द्वितीयस ड्युक अफ ओर्लेयन्स
फिलिप द्वितीय फ्रान्सका राजा लुई पन्ध्रौँका नायब थिए । सन् १७२१ मा उनी आफूभन्दा ३० वर्ष कान्छी पत्नीका अँगालोमा रहेका बेला उनको ज्यान गएको थियो । उनलाई हृदयघातका कारण ज्यान गएको मानिएको थियो ।
८. अत्तिला हुण
पश्चिमी देशहरूमा निकै आतंक मच्चाएका अत्तिला हुण साम्राज्यका प्रमुख थिए । उनका शत्रुहरूले उनलाई ‘इश्वरको कोर्रा’ भनेर बोलाउने गर्थे किनकि उनी जहाँ जान्थे त्यहाँ तहस नहस मच्चिने गर्दथ्यो । अत्तिला सन् ४५३ मा आफ्नी १२ औं रानीसँग संसर्ग गर्दागर्दै मरेका थिए ।
९. फेलिक्स फउरे
सन् १८९५ मा फ्रान्सका राष्ट्रपति बनेका फउरे १८९९ मा पेरिसको एउटा वेश्यालयमा यौनक्रिया गरिराखेको अवस्थामा मरेका थिए । धेरै इतिहासकारहरूले उनी मरेपछि उनको लिङ्ग ती महिलाको गुप्ताङ्ग भित्रबाट शल्यक्रिया गरेर झिकिएको थियो ।
१०. लर्ड पाल्मरस्टोन
संयुक्त अधिराज्यका प्रधानमन्त्र लर्ड पाल्मरस्टोन पनि संसर्गकै बेलामा निधन भएका थिए । उनको १८६५ मा उनी बिलियार्ड टेबलमा एक जना सुसारेसँग यौन सम्पर्कको क्रममा ह्दयघात भएको थियो । १८५९ मा संयुक्त अधिराज्यका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । बहालमै निधन भएका अन्तिम ब्रिटिश प्रधानमन्त्री लर्ड पाल्मरस्टोन नै हुन् ।
छिमेकीले आफ्नो श्रीमानलाई उत्तेजित पार्न भित्री वस्त्र सुकाएपछि...
काठमाडौं । मेक्सिकोस्थित क्विनटाना रोका प्रहरीले एउटा निकै अचम्मको उजुरी पाएका छन् । त्यहाँकी एक ...
काठमाडौं । प्रेमलाई नजिकबाट बुझ्नका लागि कहिलेकाँही जोडी लिभ इनमा बस्ने निर्णय गर्छन् । सँगै बसेप...
सेक्स म्यूजियममा खिचेको तस्विर पोस्ट गर्दा मोडललाई जेलको बास
काठमाडौं । एक इस्ट्राग्राम मोडलले सेक्स म्यूजियममा लिइएको आफ्नो फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा...
चीनका युवती अत्यधिक जोखिम मौल्दै किन गरिरहेछन् ? यस्तो छ कारण
काठमाडौं । आफ्ना थुप्रै साथी झैं २३ वर्षकी रक्सिन हरेक दिन आफ्नो सोसल मिडिया फिडलाई स्क्रोल गर्छि...
काठमाडौं । केही बच्चा र गर्भवती महिलामा माटो, चक वा रंग जस्ता अनौठो चीज खाने शौख हुन्छ । यसलाई पी...
यस्तो थिए पहिलेका मानिसले प्रयोग गर्ने सेक्स टोयज
काठमाडौं । यौन खेलौनाको नाम लिने बित्तिकै मानिसहरु लजाउने गर्दछन् । कुनै अर्कै संसारका बारेमा कुर...